Rivaldo oo rajeynaya in Guardiola uu ku laabto Barcelona xagaagan, muxuuse ka yiri suurtagalnimada uu Hazard ugu biiri karo Real Madrid?? – Gool FM
(Yurub) 16 Maajo 2019. Laacibkii hore kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Brazil ee Rivaldo ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay wuxuu kaga hadlay macalinka haatan leeliya Man City ee Pep Guardiola.
Rivaldo ayaa aaminsan in macalinka reer Spain ee Pep Guardiola ay suuragal tahay inuu dib ugu soo laabto kooxda Barcelona xagaagan si uu u noqdo badalka Ernesto Valverde oo halis ugu jira in shaqada laga ceyriyo.
Dhinaca kale laacibkii hore xulka qaranka Brazil ayaa wuxuu ka hadlay suurtagalnimada uu Eden Hazard ugu dhaqaaqi karo kooxda Real Madrid.
“Guardiola wuxuu yeelan doonaa fursado cusub mustaqbalka, mashaariic cusub ayaa u soo bixi doona isaga, taasoo suuragal ah inay dhacdo xagaagan”.
“Pep wuxuu haatan ku faraxsan yahay Manchester City, balse waxaa suuragal ah in dalab fiican uu ka helo dalka Spain, kaasoo noqon kara mid xiiso leh”.
“Waxaa jira sababo badan ee ku riixi kara inuu dib ugu laabto kooxda Barcelona, ay ugu horeyso inuusan jecleen inuu ka fogaado qoyskiisa iyo asxaabtiisa, waxaan filayaa in mustaqbalkiisa uu go’aan ka gaari doono”.
Intaas kaddib Rivaldo ayaa wuxuu ka hadlay suurtagalnimada uu Eden Hazard ugu dhaqaaqi karo kooxda Real Madrid wuxuuna yiri:
“Waa heshiis faa’iido u leh labada dhinac, kaddib xili ciyaareed niyadjab ah ay qaadatay Real Madrid, Khibradiisa horyaalka Premier League waxay ka caawin doonaa inuu si dhakhsi ah ula qabsado kubadda cagta ee dalka Spain”.
Kooxaha Manchester United iyo Tottenham Hotspur oo ku dagaalamaya xidig ka tirsan Barcelona